လျှပ်စစ်နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကားစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားလေအေးစက် | တေးရေး
10-12m နှစ်ထပ်ကုန်းပတ်ဘတ်စ်ကားအတွက် JLE စီးရီး
လျှပ်စစ်နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကား A / C JLE စီးရီး၏နည်းပညာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ -
48 kW သို့မဟုတ် 163776 Btu / h
42 kW သို့မဟုတ် 143304 Btu / h
လိုင်စင် (Fan အရေအတွက်)
၁၆၀၀၀ m3 / h (၈)
ရေငွေ့ပျံ (Blower အရေအတွက်)
၆၀၀၀ + ၆၀၀၀ m3 / h (၆ + ၆)
၁၁၀၀ m3 / h
1. ရေခဲသေတ္တာ R407C ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်မှုကိုနောက်ဘက်အင်ဂျင်၏အထက်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးတပ်ဆင်ခြင်းတစ်ခုလုံးကိုတွန်းထုတ်ပြီးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ ယူနစ်နှင့်ကားအတွင်းရှိလေကြောင်းပြွန်များအကြားအကူးအပြောင်းဆက်သွယ်မှု၏လေကြောင်းပြွန်ကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်သင့်သည်။
၃။ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ထားသောပန်ကာလေကြောင်းသည်လေကိုချောချောမွေ့မွေ့ဝင်စေပြီးလေနှင့်လေတိုတိုက်မှုမရှိဘဲအ ၀ င်အထွက်နှင့်လေထွက်လေကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြတ်ပစ်ရန်သေချာစေရမည်။ ယာဉ်အခြမ်း၏လေတိုက်နှုန်းဖြစ်ရမည်≤၅ မီတာ / စ။
၄။ လေအေးပေးစက်မှအစီးဘတ်စ်ကားရှိလေကြောင်းလမ်းသို့ကူးပြောင်းသောဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၏အထူးပုံသဏ္hasာန်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီဇိုင်းသည်တပ်ဆင်မှု၏လည်ပတ်နိုင်စွမ်းကိုအပြည့်အဝထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပြီးလေပြွန်၏ခုခံမှုကိုလျှော့ချသင့်သည်။ အကူးအပြောင်းပြွန်၏လေတိုက်နှုန်းဖြစ်ရမည်≤12m / s
၅။ ဘတ်စ်ကားရှိအဓိကလေကြောင်းပြွန်၏လေတိုက်နှုန်းသည်ဖြစ်ရမည် ≤၈ မီတာ / စ။
၆။ အပေါ်နှင့်အောက်အနိမ့်လေထု၏အချိုးအစားအရလေကြောင်းပြန်လည်ပေးသောကွန်ယက်ကိုသီးခြားထားပါ။ သို့မဟုတ်ပါကအပေါ်ထပ်အတွက်သီးခြားစီသတ်မှတ်ထားနိုင်ပြီးအောက်ခြေကြမ်းပြင်သည်လှေကားမှတစ်ဆင့်လေကိုပြန်လည်ပေးပို့နိုင်သည်။
7. JLE-IIIB-T ၏နောက်ကျော (အပူစုပ်စက်နှင့် PTC) ဘက်ထရီဘက်ထရီအပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် sales@shsongz.cn သို့ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
၃။ စိတ်တိုင်းကျတည်ဆောက်မှု၊ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်း၊
4. DC brushless ပန်ကာ၊ သက်တမ်းနှင့်ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်
ဘတ်စ်ကားကွန်ယက်နည်းပညာကိုလူကြိုက်များစေရန်အတွက် bus bus၊
7. ကြွယ်ဝသော optional ကိုနည်းပညာ
၇.၁ ။ "Cloud Control" လုပ်ဆောင်ချက်သည်အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်းကိုသိရှိနားလည်ပြီးကြီးမားသောဒေတာလျှောက်လွှာများမှတဆင့်ထုတ်ကုန် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းစွမ်းရည်များကိုတိုးတက်စေသည်။
၇.၂ ။ high-voltage connection ကို anti-loose နည်းပညာ
၇.၃ ။ ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုကြာရှည်စွာထိန်းထားနိုင်ခြင်းသည်ကား၏အေးမြမှုကိုမထိခိုက်စေဘဲဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရဖြစ်သည်။
၇.၄ ။ DC750V မြင့်မားသောဗို့အား
ရှေ့သို့ Electric Bus နှင့် Coach များအတွက်လျှပ်စစ်လေအေးပေးစက်, Double Air Return